ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့် ဇာဂနာကို ဖိတ်ကြား — မြန်မာဌာန
မနေ့က ညနေပိုင်းက ဇာဂနာနဲ့ ရုပ်ရှင်လောကသား တချို့ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက် လာခဲ့တဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်နဲ့ သူရဲ့နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဦးခင်ညွန့်က ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် သွားရောက်တွေ့ဆုံကြောင်း ဇာဂနာ ခေါ် ကိုသူရက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး၊ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်၊ ဇာဂနာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်း။
“ကျွန်တော် ထောင်ကထွက်တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်က ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ကိုလည်း ထောင်ထဲမှာ ထားတဲ့ကိစ္စ မသင့်တော်ပါဘူး။ လွှတ်ပေးသင့်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော် တောင်းဆိုခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီဟာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ကျေးဇူးတင်စကား ပြောချင်ပါတယ်ဆိုပြီး ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် ရောက်သွားတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ထောင်ထဲမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပြော၊ သူလည်း သူ အကျယ်ချုပ် နေရတဲ့ဘဝမှာ ဘယ်လို ဘယ်လို နေထိုင်ရတယ် ဆိုတာလေးတွေ ပြောပေါ့။ မလွတ်မြောက်သေးတဲ့လူတွေအကြောင်းလည်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်ထောင်မှာ။ သူတောင် မသိပါဘူး”
ဦးခင်ညွန့်ကို ဇာဂနာနဲ့အတူ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး၊ ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင်နဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်းတို့ သွားရောက် တွေ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလို သွားရောက်တွေ့ဆုံရတာဟာ အင်တာနက်မှာ ပျံ့န့ှံနေသလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင်နဲ့ လုံးဝ မသက်ဆိုင်သလို အဲဒီကိစ္စပြောဆိုတာလည်း မရှိဘူးလို့ ဇာဂနာက ပြောပါတယ်။
ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ မလွှတ်ရင် ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်မှာမဟုတ်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ အချိန်မတန်သေး
ကိုဇာဂနာနဲ့အဖွဲ့ တောင်ငူထောင်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လှူဒါန်း
We should think only for the country to Peace,Democracy and how to make grow
အားလုံးေျပလည္ေတာ့ေကာင္းမယ္လို႕ေတာ့ထင္တာပါပဲ ဒါေပမယ့္ ဦးခင္ညြန္႕တပည့္ေတြမွားၿပီး ေထာင္ခ်ထားတဲ့ ကုိသန္းေဇာ္ေတာ့ မလြတ္ေသးဘူးေနာ္ အားလုံးသတိထားမိမွာပါ
The stupidest thing Zagana has ever done so far!
that is good thing for us  group i mean military leader joy to us we have to welcome and we can get nice thing from him about his experince
Khin Nyunt started his campaign with meeting media at home, secondly meeting Zagana and Min Htin Ko Ko Gyi and others like DASSK did. Good play to watch. People of Burma knew what Khin Nyunt did bad to millions of innocent people and can't wait to see what is his next move. Even he said no plan to run for office, he knows his politics is already dead. But he still has his important role in the show. He will beapolitical clown horse. I think he better work for RFA or VOA. The audience get bored to stories by Ko Aung Lin Htun. Khin Nyunt may beabetter story teller. RFA does not have good work for long time. RFA Burmese department needs little assignment.
BELIVED IF OR NOT
Zagana,Why you done like this?don't understand.
ကိုယ္စီရိွၾကမွာပါ ဒါေပမဲ႔ တိုင္းျပည္ကို
တရားလက္လြတ္ ထင္သလိုအုပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္ေနတာကို ေဝဖန္ကန္႔ကြက္တဲ႔
သူမွန္သမွ် မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ ညွင္းဆဲရက္စက္ ေထာင္ခ်သတ္ျဖတ္တဲ႔အထိ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူေတြရဲ႕ အလွမ္းသင္႔သလို
သူေတာ္ေကာင္းလို႔ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ . . . . .
ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ဘူး ေျပာၿပီး လာမေရာနဲ႔။ လက္စားေခ်မွာေၾကာက္လုိ႔ အခုမွ မ်က္ႏွာခ်ိဳ ေသြးတာလား
ွေစာက္မွတ္မရွိၾက ဘူး ၊ ေသျခင္လို.